लेकसाइडकी शशिकलाले जितिन मिस तामाङ पोखरा २०२० ताज – Online Annapurna
५ माघ २०७६, आईतवार ०९:४२ January 19, 2020 123 Views
पोखरा, ५ माघ । पाँचौ संस्करणको मिस तामाङ पोखराको उपाधी लेकसाइडकी शशिकला तामाङले जितेकी छिन् । शनिबार पोखरा सभागृहमा भएको ग्राण्ड फिनालेमा १६ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै शशिकलाले ताज पहिरिन सफल भएकी हुन् । उनले मिस ट्यालेण्टको टाइटल पनि जितिन । जितसंगै उनले रु १ लाख नगद, ताज, ट्रफी, प्रमाणपत्र सहित म्युजिक भिडियोको अवसर तथा आकर्षक गिफ्ट ह्याम्परहरु प्राप्त गरिन ।
प्रमुख निर्णायक नेपाल वायु सेवा निगमका क्याप्टेन विजय लामाले तामाङ समुदायको विकासका लागि के योगदान दिनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्कृष्ट जवाफ दिदै अन्य प्रतियोगीलाई पछि पारेकी हुन् । सलिना तामाङले फस्र्ट रनरअपसंगै बेस्ट वाकको टाइटल जितिन । उनले नगद ५० हजार रुपैयाँ, ताज, ट्रफी, प्रमाणपत्र प्राप्त गरिन ।
यस्तै बेस्ट पर्फमरको टाइटल जितेकी रेनु तामाङ सेकेण्ड रनरअप बनिन् । उनले नगद ३० हजार रुपैयाँ सहित ताज, ट्रफी, प्रमाणपत्र सहित हात पारिन । ब्युटी विथ प्रपोज सहित भ्यवर्स च्वाइस अवार्ड जितेकी प्रिती वाइवा तामाङ्गले नगद २० हजार पुरस्कार समेत प्राप्त गरिन ।
ब्राह्मण समाज नेपालका अध्यक्ष डा. नारायण अधिकारीले हाम्रो सभ्यताको विकास हिमालय सेरोफेरोमै भएको जोड दिंदै बुद्धको जन्मभुमी भएको देश नेपालमा अन्य संवत भन्दा पनि बुद्धको संवतनै चलनचल्तीमा ल्याउन सके उपयुक्त हुने धारणा राखे । बैदाम तामाङ्ग सेवा समाजका अध्यक्ष ज्याक तामाङ्गको अध्यक्षतामा भएका कार्यक्रममा समाजका उपाध्यक्ष जयन्ती मोक्तानले स्वागत गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा नेपाल तामाङ्ग घेदुङ्ग गण्डकीका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक वाइवा तामाङ्ग, नेपाल वायु सेवा निगमका क्याप्टेन विजय लामा, सिजी व्रुअरीका रिजनल म्यानेजर सुवोध रिजाल लगायतले बोलको थिए ।